Video nke ọmụmụ nke oke ikuku mmiri | Netwọk Mgbasa Ozi
Vidio: Ọmụmụ nke oké ifufe
na ọkụ oké mmiri ozuzo Ha nwere ike iyi ihe ịtụnanya mepụtara, mana eziokwu bụ na ha bụ ihe okike. Ikuku ikuku ikuku dị egwu, mana oke ikuku ọkụ ... bụ ihe pụrụ iche.
Ọ ga-amasị gị ịhụ ọmụmụ nke oke ikuku ọkụ?
Oke mmiri ozuzo na-etolite n'okpuru ọnọdụ akọwapụtara, n'ozuzu ya bụ ndị achọtara n'ọhịa. Ọkụ ahụ na-agbagharị n'otu oge ka ọ na-arị elu, na-eme kọlụm ikuku. Ha na-adịkarị n’agbata mita iri na ise n’ogologo, na mita ole na ole n’ogologo. Ikuku ikuku siri ike nke ukwuu, ihe karịrị 160km / h, ya mere ha dị oke egwu, ebe ha nwekwara ike ibibi osisi dị elu karịa 10 mita.
N'akụkọ ihe mere eme na nso nso a, e nwere ọtụtụ oke ikuku oke ikuku nke gburu ọtụtụ puku mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, Bombardment nke Dresden (n'oge Agha IIwa nke Abụọ) guzobere otu nke bibiri ọkara obodo, na mgbakwunye na igbu ihe dị ka puku mmadụ 40. Oke ikuku nke oku bu, dika anyi hu, ihe ohuru na ọ pụrụ ibibi ihe nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị hụ otu, ihe kachasị mma ị ga-eme bụ ịgbapụ ma kpọọ ngalaba ọkụ.
Agbanyeghị, mgbe ịchọrọ ịmụ ihe, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịme otu n'ọhịa na ịdekọ ihe na-eme nwayọ, dị ka Slow Mo Guys mere. Ha mere ya site na ịmaliteghachi usoro ahụ n'ụzọ rụrụ arụ, na-ekpuchi Fans gburugburu bọket nke ọkụ ọkụ. Nsonaazụ ya dịkwa ịtụnanya.
Obere obere ka e kere okirikiri okirikiri, nke mere ka ọkụ na ... na ihe dị mkpirikpi oge, a kọlụm ọkụ. Na-akpali mmasị, ị naghị eche?
N'ezie, ọ bụrụ na ị nwaa anwa anwa, mee ya ebe ị nwere ike ijikwa ya, yana na-ezere drafts siri ike iji zere iwe.
Kedu ihe i chere banyere vidiyo ahụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Vidio: Ọmụmụ nke oké ifufe
Mba ndị kacha oyi na mbara ala
Na-eto akwụkwọ nri ... na oyi na-atụ Alaskan tundra?